အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
Posted by kai on Feb 11, 2014 in Editor's Notes | 47 comments
ဤကမ္ဘာမြေ၀ယ် တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာများကိုအလကားရသည်ဟု ရှေးစာတခုကဆိုသည်။
ဥပမာ။ ။ ရေနှင့်လေ..။
၂၀၁၄နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အမေရိကား၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊တောင်ပိုင်းဒေသတို့၌ဆီးနှင်းပွင့်မုန်တိုင်းများအတွဲလိုက်ဝင်ချလာခဲ့ပါသည်။
ဆီးနှင်းထုသည် တပေမှ၁၈လက်မ အထိစံချိန်တင်ကျခဲ့ပြီး ဇန်န၀ါရီပထမ၃ပါတ်အတွင်းတွင်ပင် လေယဉ်ခရီးစဉ်ပေါင်း ၃၃၀၀၀ကျော်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရကြောင်းနှင့် ၂၀၁၃နှင့်၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၂နှစ်ပေါင်းစာထက်များသေးကြောင်း သတင်းများတွင်ဖတ်ရပါသည်။
တချိန်တည်းတွင် အမေရိကား၏ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကား ရာစုနှစ်တခုသမိုင်းစံချိန်တင်သွေ့ခြောက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကာ ပြည်နယ်အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာလိုက်ရပြီး ရေအသုံးပြတ်တောက်မည့်အန္တရာယ်တို့ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ယခုနှစ်၏ တိုင်းပြည်အခြေပြမိန့်ခွန်းတွင် သမ္မတအိုဘားမားက ကမ္ဘာပူနွေးလာမှုသည် အငြင်းပွားနေစရာမဟုတ်တော့ပဲအချက်အလက်( Fact )ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပူနွေးလာမှုကြောင့်အာတိတ်စက်ဝိုင်းဖက်မှအရေပျော်ကျနေသည့်ရေခဲပြင်ကြီးများသည် ပင်လယ်ရေကိုမြင့်တက်စေကာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့များကို ခြိမ်းခြောက်နေပါသည်။
လူသားရာဇ၀င်တွင်မကြုံစဖူးထူးသော အာတိတ်ဝင်ရိုးစွန်းဖြတ်ဖေါက်ထွက်နိုင်သည့် ခရီးတိုပင်လယ်ကူးသင်္ဘောရေလမ်းကြောင်းသစ်များပင်ထွက်ပေါ်လာတော့မည်ပြောနေကြရသည်။
ဥတုရာသီအပြောင်းအလဲကိုမှီသော ဤအချက်အလက်တို့ကို အခြေပြုလုပ်နိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတို့ထောင်တက် အသစ်ဖွဲ့လာနိုင်ကြပြီ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်တို့လည်းထွက်လာပါသည်။
ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောတွင်တော့ ရေခဲ့ပြင်ကြီးများအချပ်လိုက် အပြင်လိုက်ပျော်ကျနေကြပေရာ လွန်ခဲ့သောနှစ် ၅၀မှဓါတ်ပုံနှင့်ယခုနှစ်ပိုင်းမှဓါတ်ပုံတို့ နှိုင်းယှဉ်ပြသခြင်းတို့ဖြင့်အချက်အလက်တို့ကို ရုပ်ဝတ္ထုကသက်သေလုပ်ပြနေကြပါလေသည်။
မိုးခေါင်သဖြင့် မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမှမြို့လေးတမြို့(Willits)သည် ရက်၁၀၀စာသုံးရန်ရေသာရှိတော့သည့်အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြီး မိုးခေါ်ရန် ရိုးရာအစီအမံများပင်လုပ်ကြရသည်ဟု NPR ရေဒီယိုအင်တာဗျူးတွင်မြို့တော်ဝန်ကပြောပြသည်။ မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယာရှိ မြို့များစွာကမူ ရေအသုံးကို ၂၀မှ၂၅ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြတ်တောက်လျှော့ချနေကြရပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီပထမပါတ်ကရွာခဲ့သောမိုးမုန်တိုင်းလည်းမကယ်နိုင်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ ၆၀%သောရေချိုရရာဒေသကြီးဖြစ်သည့် Sierra Neveda တောင်တန်း ဒေသရှိနှင်းဆီးခဲတို့မှာ နာဆာမှပေးပို့သော ကောင်းကင်နှိုင်းယှဉ်ပုံတွင် ယမန်နှစ်၂၀၁၃နှင့်ယှဉ်လျှင် အဖြူရောင်(ဆီးနှင်းခဲ) မဲ့လျှက်ညိုသယောင်းထနေသော ကျောက်ဆိုင်မြေပြင်များသာ ဖွင့်လှစ်ပြသနေသည်။ အဆုံးစွန်သို့မရောက်နိုင်သေးပါဟု ဆိုနိုင်ငြား ပုံမှန်မဟုတ်သော သဘာဝအခြေအနေများသည် လူသားတို့ကို အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးပြသနေခဲ့သည်။
သို့ဆိုပြရလျှင်.. အမေရိကားမှအမေရိကန်တို့သည် မိခင်သဘာဝမှလက်ဆောင်ပေးသောရေကို သကြားခပ်ကာရောင်း၍ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကုမ္မဏီကြီးတခုအဖြစ်ထောင်စားကာ ကမ္ဘာ့လူထု၏ငွေတို့သဲ့ယူပြခဲ့သည်။ မိုးမှကျသောရေကို အချိုသကြားခပ်ရောင်းသဖြင့် လူတို့သည်မိုးချိုရေသောက်ကြသူများဖြစ်နေပါသည်။ ရူးကြသည်ကောင်းကြသည်တော့မသိ။ ကိုကာကိုလာ ကုမ္ပဏီ၏တနှစ်ရောင်းရငွေသည် ၄၈ဘီလီယန်ဒေါ်လာရှိနေပါလေ၏။
ယခုခေတ်ဆိုလျှင် အမေရိကားတ၀ှမ်းတွင်ရေသန့်သန့်ကိုပင် ဗူးပုလင်းထဲထည့်ရောင်းသော စီးပွားရေးများအသီးသီးပေါ်ထွက်လို့လာနေပါသည်။
မိခင်သဘာဝ၏လက်ဆောင်ရေကို သဘာဝအားဖိတ်စင်ပျက်ဆီးစေသည့် ပလပ်စတစ်ဗူးများတွင်ထည့်ရောင်းနေခြင်းပေတည်း။
မိုးပေါ်မှချပေးသောအရာများကိုကြည့်ပြီးသဘာဝလက်ဆောင်ကို ဆက်စပ်တွေးခြင်း ဖြစ်ရသည်။
တိမ်ညိုတိမ်စိုင်တို့သည် မိုးကိုရွာစေသည်။ မြင့်သော အေးသောနေရာတွင်ဆီးနှင်းပွင့်တို့ကျစေသည်။ တောင်ပေါ်တောင်တန်းမှ ဆီးနှင်းခဲတို့သည် အပူချိန်ပြောင်းသည့်ရာသီခွင်နှင့်ကကြိုးညှိကာ တဖြေးဖြေး ပျော်ကျဖျော်လွှတ်ပါသည်။
အဆိုပါပျော်ရေတို့သည် ရေစီးကြောင်းလေးများမှသည် မြောင်းငယ်ချောင်းငယ်၊ ထိုမှသည်မြစ်ငယ်မြစ်ကြီးအဖြစ် မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ခရီးသွားကြ၏။ သွားရာလမ်းတလျှောက် လူသားတို့ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည့် သောက်ရန်သုံးရန်နှင့် စားရေရိက္ခာစိုက်ရန်အင်အားဖြစ်စေသော ရေကိုပေးကမ်းသွားသည်။
အဆိုပါရေတို့အုပ်ဝပ်စုရာ နေရာတို့သည် အင်းအိုင်တို့ဖြစ်လာမည်။ သဘာဝဂေဟကိုဆက်စပ်ရှင်သန်စေရာ သစ်တောမြေပြင်ကိုဖြစ်စေသည်။
မိုးမှစသောရေသည် နောက်ဆုံးတွင် ပင်လယ်၊သမုဒ္ဒရာသို့ပြန်စီးဝင်ရင်း ရေငန်တို့နှင့်ရောသမကာ ရေချိုဘ၀ ပြီးပြတ်ကုန်ဆုံးခြင်းတို့ရောက်ပါသည်။
အဆိုပါသံသရာသည် နှစ်သန်းချီလည်လာခဲ့သော်လည်း ယခုကဲသို့ ကမ္ဘာမြေတခုထဲတွင်လူသားသန်း၇ဘီလီယန်ကျော်ရှင်သန်နေထိုင်ကြရသော ခေတ်ကြီးတွင် လူသားတို့အတွက် သုံးရေ သောက်ရေတို့ဖြည့်စည်းပေးနိုင်မှု ကျဆင်းလျှော့နည်းလာသည်ကို တွေ့ကြရမည်။
ကုလသမဂ္ဂထုတ် World Water Development Report အချက်အလက်များအရ ၄၃နိုင်ငံမှ လူသားသန်း၇၀၀ တို့သည်ရေမလုံလောက်သည့်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရသည်ဆိုပါသည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာအရ လူသားတဦးအတွက် တနှစ်လျှင်ရေကုဗမီတာ ၁၀၀၀ပမာဏ ပေးနိုင်မှုထက်လျှော့နည်းလာလျှင် အဆိုပါဒေသသည်ရေမလုံလောက်မှုပြသနာကိုရင်ဆိုင်ရပြီဟုဆိုပါသည်။
အံ့သြဖွယ်ရာပင် မုတ်သုန်မိုးကြီးပုံမှန်ရသော မြန်မာနိုင်ငံသည် ရေချိုပြတ်လတ်နေသည့်နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။
မြန်မာပြည်၏နွေ၊မိုး၊ဆောင်း ၃ရာသီတွင် မိုးရာသီ ၄လရှိနေသဖြင့် မိုးရေ၏တန်ဖိုးကိုသတိထားမိခြင်းထက် မြစ်တို့၏သဘာဝအပိုလက်ဆောင် လျှပ်စစ်အားထုတ်လုပ်မှုဖက်အာရုံပိုကျနေသည်ဟု သတိထားမိပါသည်။
လျှပ်စစ်အားသည် တိုးတက်သောလူ့ဘောင်လူသားတို့အတွက်များစွာပဓါနကျလှပါသော်လည်း ကိုကာ၊ ပက်စီကဲသို့သော အမေရိက၏ ရေချိုသကြားခပ်ကုမ္ပဏီကြီးများ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးပွင့်လင်းပါပြီဆိုသည်နှင့် မြန်မာပြည်တွင်အခြေချ ထုတ်လုပ်လာကြသည့်ခြေလှမ်းတို့ကိုစောင့်ကြည့်သတိပြုမိလျှင် မြန်မာ့ရေသည် သစ်ပင်ဆန်စပါးလယ်ယာစိုက်ထွက်ကုန်များထက်ပင် ပိုလွယ်ကူစွာနိုင်ငံခြားငွေရှာပေးနိုင်တော့မည်ကို မြင်သာပါ၏။
ကမ္ဘာ့ရေနှင့်ပါတ်သက်သော ဈေးကွက်ပမာဏသည် ၅၀၀ဘီလီယန်ဒေါ်လာရှိသည်။ နောင်၁၀နှစ်တွင် ၂ဆတိုး၍ ၁ထရီလီယန်ဖြစ်မည်ဟုလည်းခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြသည်။
စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လှသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဘေးဒေသ အပူပိုင်းဇုန်ရေရှားဘ၀တို့တွင် မြန်မာ့လူထုအများနေထိုင်ကြရသည်။ အဖိုးတန်ဆုံးအရာကိုရလျှက်မှ လက်ဝယ်ထင်ရှားမရှိ၊ မသုံးတတ်ဖြစ်ကြရသည်။
တိုင်းပြည်တပြည်၏ကံကြမ္မာကို ခေါင်းဆောင်တဦး၊ တယောက်ထဲကပင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပင် အမြင်မှောက်မှားကာ ဖယ်ချပစ်ပယ်လိုသောသဘောသဘာဝတို့ မြန်မာသာမန်လူထုအတွင်းတွင်ပင် ခပ်စိတ်စိတ်ကလေးတွေ့လာရသည်။
ကံကြီးထိုက်နေသလော။ ခိုက်နေသလော၊ ကျိန်စာမိနေသလော။
ဘုန်းတော်ကြီးများက ဥပဒေပြုလိုသောတိုင်းပြည်။ စစ်တပ်က လွှတ်တော်တွင်ဆုံးဖြတ်မဲယူထားသောတိုင်းပြည်၊ ဆရာဝန်က ဆေးရောင်းထွက်ရသောတိုင်းပြည်၊ အင်ဂျင်နီယာက သင်္ဘောတက်အလုပ်လုပ်သောတိုင်းပြည်ပင်တည်း။ ပြည့်တန်ဆာဝင်ငွေက ရဲအရာရှိလစာငွေကိုကျော်လွန်နေသည့်နိုင်ငံတည်း။
ဧရာဝတီ၊စစ်တောင်း၊သံလွင်မြစ်ရေတို့သည် ပင်လယ်ထဲသို့တသွင်သွင်စီးဆင်းလျှက်ရှိကြကုန်၏။ တန်ဖိုးအရှိဆုံးရေချိုတို့ကိုပင်လယ်ပြင်ထဲ တရစပ်သွန်ချနေသည်နှင့်အလားတူပါသည်။
မိခင်သဘာဝနှင့်ဧရာဝတီသည် မြန်မာပြည်နေလူသားသန်း၆၀မျှကို ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်လျှက်သာနေလေသည်။ ။
. ချီးမွန်းဂုဏ်ြ့ပုပြောဆိုခြင်းအတွက် ဤ အယ်ဒီတာ့ သင်ဘုန်းဂျီးအား
. အလွန်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဦးစွာပထမ ပြောကြားလိုဘါဒယ်ခင်ဗျား
. ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီး၏ ရေခဲထုများပျော်ဝင်စီးထွက်စီးထွက်ကုန်းခြင်းနှင့်
.ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး နှင့် မြန်မာ့ရေချိုမြစ်များ ၏ ရေချိုတို့ အလဟသ ပင်လယ်ထဲစီးထွက်ခြင်းကို
. ထောက်ပြသတိပေးခြင်းအားလည်း ဒုတိယမ္ပိကျေးဇူးအထူးတင်ရှိရပြန်ပါသည်
. ၄င်နှင့်အတူ ရေချိုမြစ်ဘေးနေ ပြည်သူတို့၏ ရေဘေးဒုက္ခကို
. ခံစားကိုယ်ခြင်းစာပေးခြင်းအတွက်လည်း သိုင်းကယူးဘါ
. ထိုအရာကိုထောက်ပြပြီး စစ်အာဏာရှင်တစ်စုနှင့် အရှင်းရှင် လူယုတ်မာ
. ချိုင်းနား တို့၏ ကိုယ်ကျိုးတွက်သက်သက်ဖြစ်သော
. ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့မရှိသော ပြ့ည်သူ့အကျိုးတွက်ဟု အမည်တပ်ပြီး
. ပြည်သူတို့၏ အားပေးထောက်ခံမှု့ ( ပြည်သူတို့နှင့် ကျိုတင်သဘောရယူမှု့မနရှိသော )
. မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးအား လုပ်သင့်သည်ဟု ပြောလျှင် အပီအပြင်ကန့်ကွက်ပါမည်။
( ဤ တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို မထောက်ခံ/ထောက်ခံ ဟု မဆိုလိုပါ )
. အာဏာရှင်ဆန်ဆန် စစ်အုပ်စုနှင့် ကိုယ်ကျိုးရှာ လောဘသား ချိုင်းနားတို့၏
. ပွင့်လင်းမြင်သာမှု့ တရားမျှတမှု့မရှိသော မူရင်းသဘောထားကို
. http://www.myanmargazette.net အင်တာနေရှင်နယ် အပျီပျီဆိုင်ရာ
. နံမယ်ကျော်ကြားလူကြိုက်များ ဆာယေးစယာ
( ကိန်ကိန် )
ဘပုတို့များ.. Hidden Message တန်းမိတာပဲ..။တယ်တော်…။
အဲဒီမြစ်ဆုံကိစ္စ… ဒေါ်စုသဘောအတိုင်း လူထုက.. နောက်ကလိုက်သင့်ကြတယ်လို့ ဆိုလိုရင်းပါ…။
မြစ်ဆုံကိစ္စမှာ.. စီအိုင်အေက.. ထဲထဲဝင်ဝင်ပါနေတယ်လို့.. ယုံကြည်မိတယ်..။
စိနပြည်ကလည်း.. ချည်တုပ်ပြီးလို့.. ထင်မိတယ်..။
မြန်မာပြည်အတွက်လည်း.. ဧရာဝတီရဲ့ရေကာတာတွေက.. လိုအပ်နေတာသေချာတယ်လို့.. တွေးမိတယ်..။
Win-Win-Win ဖြစ်ဖို့.. လုပ်ရာမှာ.. ကိုင်တွယ်တတ်သူ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက်ပဲရှိမယ်လို့.. ယုံကြည်တယ်..။
ဒို့ဘဂျီး မြို့ဝန်မင်း ဒီတစ်ခါတော့တယ်ဟုတ်..
နှစ် ၂၅ နှစ်လုံးလုံး……….. (အရင်က အကျင့်ယုတ်တာတွေတော့ ထည့်မတွက်တော့ဘူးးး)
ဒီ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းကို ……………………
နိုင်ငံကာကွယ်တဲ့ အဖွဲ့လို့ အမည်ခံထားတဲ့ အဖွဲ့မှ ယောင်္ကျားကြီးများမှ………………..
အပုပ်ချ၊ နှိပ်စက်၊ လုပ်ကြံ၊ နှိမ်ချ၊ အကျင့်ယုတ် တာတောင် ဒီ အမျိုးသမီး ခုချိန်ထိ ပန်းပန်နေနိုင်ဆဲ ဆိုတော့ကာ……………………….။
ဒီကတည်းက ကြီးမေရဲ့ ဟန်ဒလင်းလုပ်နိုင်မှုကို သဘောပေါက်သင့်ပါပြီ လို့
အုပ်ချုပ်ရေးမှ ကြံရာပါ ဘဘဂျီးများနဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါ အောက်ဆွဲများကို ပြောချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ… သူများဒွေက ဒေါ်စုခံနေရတယ် ဒေါ်စုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး ပြောရင် ခုချိန်ထိ စင်ပေါ်က နေနိုင်တာ အာဏာမရသေးတာကလွဲလို့ အပြောင်းအလဲတော်တော်များများလုပ်နိုင်တာ ပူးသင့်တဲ့အချိန်ပူး ခွာသင့်တဲ့အချိန်ခွာတတ်တာ… မှ တစ်ပါး အခြားမရှိပြီ…
မြစ်ဆုံက ဘာမှ အန္တရာယ်မဖြစ်ဘူး ဆိုတာကို လေ့လာစမ်းစစ်မှု အမှန်တကယ် (ပီပီပြင်ပြင်) လုပ်။ ပြည်သူတွေကို အသေးစိတ် ချပြ။ အဲလို ဆိုရင် တော့ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းတွေက အန္တရာယ်ဖြစ်စရာမရှိဘူးဆိုတာ.. မဖြစ်နိုင်..။
ဒါပေမယ့်.. ဒါကဒီလိုရှိတယ်… :buu:
ကာဗွန်မှုန်တွေထွက်လို့ ဤကမ္ဘာမြေတွင်ဒီဇယ်ဆီမသုံးရဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်..။နှူကလီးယားစက်ရုံတည်လို့.. ရေဒီရေးရှင်းနဲ့လူတွေသေနိုင်တာမို့.. မဆောက်ရ…ဆိုတာမျီုးလည်းလုပ်မရ…။
အခုတိုးတက်ပြီးတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေ.. အပြတ်ကြီး”သမ”ခဲ့လို.. အခုလိုလူသိန်း-သန်းချီဒုက္ခရောက်တဲ့.. ရာသီဥတုပြောင်းတာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီ..။
ဖြစ်တော့ကော သူတို့ရပ်သလားဆိုတော့.. အသားကုန်သာအော်နေတာ.. ကမ္ဘာ့ကွန်ဖရင့်တွေသာအလုပ်ပြနေတာ…
ပြောရရင်.. စိနပြည်က.. ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေလှောင်တမံကြီးဆောက်လို့.. ကျေးရွာဘယ်နှသောင်းဘာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောပြော… .. အစိုးရကတော့လုပ်တာပဲ..
အမေရိကားပြည်.. ကိုရိုရာဒိုမြစ်ကြီးဆည်ဖို့လို့.. ငလျှင်ထိပြီးပြိုကျလူတွေသေမယ်ဆိုလည်း.. လူတွေဆာယိုနာရ.. အစိုးရကလုပ်သင့်တာလုပ်တာပဲ..။
ဆည်တွေလုပ်ထည့်ပြီး.. ရေချိုရော..လျှပ်စစ်ကောယူထည့်လိုက်တာ.. ကိုလိုရာဒိုခမြာ.. ပင်လယ်ထဲထွက်ဖို့ရေတောင်မရှိပဲ.. ဖြစ်သွားရရှာတယ်လေ…။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့.. လူထု(ပို)အများ… ချမ်းသာရာရဖို့… ဆိုရင်.. စတေးသင့်တာစတေးရမှာပါ..။
စတေးတာမှာအလဟသစတေးရတာမျိုးမဖြစ်ပဲ.. အမြတ်အများဆုံးရအောင်.. လုပ်သင့်လှတယ်..။
စိနပြည်က ဆည်ဆောက်လို့ လွတ်ပေးရတဲ့မြေ အကျယ်အဝန်းလေး သိချင်ပါတယ်ခဗျ။
အဲဒီ ဆည်ကြီး ကျိုး သွားရင် စိနပြည် ဘယ်အကျယ်အဝန်းလောက်ပျက်စီးသွားနိုင်သလဲခဗျ။
ဆင်လို အကောင်ကြီး သူမနာတဲ့ ဆူးက
ယုန်လို အကောင်ငယ်အတွက် သေလောက်တဲ့ အဖြစ်ပါခင်ဗျ။
တိုင်ပြည်အကျယ်အဝန်းမရှိတဲ့နိုင် ငံ မို့ စဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ် နောက်တနည်း ။
တကယ့် စစ်မှန်သော win – win – win ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်လျက်. . . .
ဂဘာ ပူလာတာ ဒို့ရင်ထဲက အပူတွေလောက် အရှိန်မပြင်းသေးပါဘူးးးဟူးးးး
အခု သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ပြီးသွားရင် …
လက်ရှိ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ …
ဘာသာ၊ လူမျိုးကိစ္စတွေ နည်းသွားအောင် ….
မှတ်ပုံတင်မှာ အားလုံး မြန်မာပေါ့ ….
ဘာသာ၊ လူမျိုးဆိုတာတွေကို ထည့်မလုပ်အောင် ….
ကျွန်တော် အကြံပြုထားပါတယ် ….
ဦးခင်ရီ ( ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး )
ဒီမှာ …. ကခင်ရီ …
အကြုံပြုတဲ့ အဆင့်က …
အကောင်အထည်ဖော်မယ့် အဆင့်ကို ….
တကယ် ပြောင်းလို့ ကတော့ ….
အမျိုးသားရေး အုပ်စုတွေနဲ့….
ထိပ်တိုက် တွေ့ ပြီလို့ သာ မှတ်လိုက်ပါတော့ ….ကခင်ရီ….
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး သူများတွေဆီကကူးပြီး ထပ်ဖွပေး အဲ အဲ မှားလို့
သူတို့ တွေ ပြဿနာရှာတော့မယ် ……လို့
မြစ်ဆုံမှာ ဆည်ဆောက်လို့ ငါးသလောက်မျိုးတုံးတာ ဂရုမစိုက်ဘူး…
ပိုက်ဆံရှိရင် ဆယ်လမွန်ငါးကို အစားထိုးပြီး ဝယ်စားမယ်…
ဆည်ပိတ်လို့ ပင်လယ်ဝကနေ ရေငံဝင်မှာကို ဘယ်လိုတားမှာလဲ…
ရှိသမျှ စိုက်ပျိုးမြေတွေ ဆားပေါက်လို့ အကုန်ပျက်…
တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဘင်္ဂါလီနောက်ကိုလိုက်လို့ ရိုဟင်ဂျာပါဆိုပြီး…
နိုင်ငံတကာလှည့် ခွက်ဆွဲရမည့်ကိန်းမို့ ပြောနေတာပါ…
သစ်ပင်ခုတ်လို့ တောတွေကပြောင်… ဘယ်မှာလဲ Reservoir Forest ???
တောင်တွေပြိုပြီး နုန်းကန်ဖြစ်ရင် ဘယ်သူကဆယ်ပေးမှာလဲ…
(ဒီလောက် ဧရာဝတီမြစ်က နုန်းပို့ချမှုနှုန်း များလွန်းလို့ ရေစီးကြောင်းပြောင်းလိုက် ၊ သောင်ထွန်းလိုက် ၊ ကမ်းပါးပြိုလိုက်ဖြစ်နေတာ… အားလုံးမျက်မြင်)
ဒီဆည်ဆောက်လို့ ဘယ်သူက အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမှာလဲ…
ကျောက်စ်တို့က ဒီမြေမှာပဲခေါင်းချ ၊ မျိုးဆက်လည်းထားခဲ့မှာမို့…
စတေးရတာ တန်တယ်လို့ မမြင်ပါဘူး…
ညူကလီးယားစက်ရုံတွေ ၊ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတွေ တည်ပလိုက်…
G-8 က စိုးရိမ်ရင် ၊ ထောက်ပံခိုင်းလေ (ထိုင်းတွေ အဲလိုလုပ်စားနေတာ)…
အဲလိုကြတော့လည်း အကွက်မမြင် ၊ ဉာဏ်မရှိ…
ထစ်ကနဲရှိ နေ့စားခယူပြီး ဆန္နပြဖို့ကြံနေကြတာ…
အဲ… အပြတ်ပြောရရင် ဘွားတော်စု ဝင်ညှိပြီး အာမခံတယ်ဆိုရင်လည်း…
ထောင့်စေ့အောင် တွက်မထား ၊ ချမပြရင်တော့…
…. “ဆောရီး” … ပါ…
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အနေနဲ့ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ပုသိမ်မြို့ရှိ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက်မှာ မတ်လနောက်ပိုင်းတွေဆိုရင် ရေငန်တွေ တက်လာတောင်ကြောင့် ရေကြည်ဦးရပ်ကွက်နှင့် တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာဆိုရင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပြီး အခြားနေရာတွေမှာလည်း ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီနေရာတွေမှာ အရင်ဆုံး အသုံးပြုစေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအသုံးစရိတ် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဟာ နှစ်စဉ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေခွဲတန်း အသုးံစရိတ်ထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးချဖို့အတွက် ချထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကို လာမယ့် (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ နှစ်စပိုင်းတွေမှာ အသုံးမပြုပဲ ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲတန်းကိုကြည့်ပြီး အဲဒီခွဲတန်းထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ နေရာတွေမှာသာ သုံးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် ပေါများတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလို နေရာမျိုးမှာတောင် သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ပြဿနာများဟာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက် သောက်သုံးရေရရှိမှုကို ဦးစားပေး စဉ်းစား ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပူပိုင်းဇုန်ဒေသမှာ (၂၀၁၃)ခုနှစ်အတွင်း စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေအရ အိမ်ထောင်စုအားလုံးရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု သတ်မှတ်မျဉ်းအောက်ကို ရောက်ရှိနေပြီး ငါးပုံတစ်ပုံ (၁၈.၅%)ကတော့ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းကို ဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လ အတွင်းမှာ ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်(WFP)၊ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (Save the Children)နဲ့ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနတို့ ပူးတွဲ ကောက်ယူခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးမပြုနိုင်သေးတဲ့ အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့ လာမယ့် ငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁) ဘီလီယံ မြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတွင်း ရေစူးသတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဆင်ဘို-မြစ်ကြီးနား ရေကြောင်းတွင် ရေစူးအနက် နှစ်ပေခွဲသာရှိ
ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတွင်း ရေကြောင်းကျပ်ခြင်းကို ယခုနှစ်တွင် ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်းမှ စတင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ရေနည်းကာလ ရေစူးသတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ ရေနည်းကာလတွင် သင်္ဘောခရီးစဉ်များ သောင်တင်ခြင်း မတော်တဆမှုများနှင့် ခရီးစဉ်နှောင့်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် သတ်မှတ်ရေစူးများအတိုင်း ကုန်စည်တင်ဆောင်ကာ ပြေးဆွဲခုတ်မောင်းနိုင်ရန် မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ရေစူးသတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၌ ရေစူးအတိမ်ဆုံးအပိုင်းမှာ ဆင်ဘို-မြစ်ကြီးနား ရေကြောင်းဖြစ်ပြီး ရေစူးအနက် နှစ်ပေခွဲသာရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ မန္တလေး-ပြည် ရေလမ်းကြောင်းတွင် ရေစူးငါးပေ၊ မန္တလေး-ကသာလမ်းပိုင်းတွင် ရေစူးလေးပေ၊ ကသာ-ဗန်းမော်တွင် ရေစူးသုံးပေကိုးလက်မနှင့် ဟင်္သာတ-ပြည် ရေကြောင်းတွင် ငါးပေခြောက်လက်မဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရေနည်းကာလအတွက် ရေစူးသတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့်အတူ ပြေးဆွဲသွားလာ ခုတ်မောင်းနေသည့် ရေယာဉ်များတွင် ရေစူးကန့်သတ်ချက်များအတိုင်း ကုန်တင်ပြေးဆွဲခုတ်မောင်းမှုကို စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနမှ ရေနည်းကာလအတွင်း ရေယာဉ်များ အဆင်ပြေစွာ ခရီးသွားလာနိုင်ရန် ရေကြောင်းကျပ်တည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော နေရာများ၌ သောင်တူးခြင်း၊ ရေမြုပ်ကျောက်တန်းများကို ရှင်းလင်းမှုများ အပါအ၀င် ရေလမ်းကြောင်း ပြုပြင်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
… အဲဒီသတင်းလေးခုက.. မတူတဲ့နေရာတွေကနေပြီးခဲ့တဲ့.. ၁လအတွင်းပဲစုထားတာတွေ..
Fact တွေဖြစ်ပါတယ်..။ Fictionတွေမဟုတ်..။ ဖြစ်နိုင်လတံ့..ဖြစ်မည်ခန့်မှန်းမိပါသည်..တွေမဟုတ်..။
ခုခေတ်မှာ.. မြန်မာတွေတကယ်လိုနေတာ.. ရေချိုရယ်..လျှပ်စစ်အားရယ်..။ နိုင်ငံခြားငွေရယ်..။ ဧရာဝတီကို အမြန်ဆုံးကယ်တင်ဖို့ရယ်..။
ညူကလီးယားစက်ရုံတွေ ၊ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတွေ တည်ခြင်းကိုလည်း.. ချွန်းဒေါ်ဒို့.. အားကြီးအားကျယ်အားဘေးဂျောင်း…။
good government က အရင်လိုတယ်ထင်ပါတယ်
good government ဆိုတာရှိမှ ဒါတွေက good good good
တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင် good တဲ့ လမ်းကြောင်းကိုပဲ ရွေးချယ်စေ
ခုပုံစံက ဆေးဆရာ လူနာကို မျက်ဖြူဆိုက်အောင်အရင်လုပ်
ပြီး လူနာ ရှင်ဆီက လဒ်လာဘ ရယ် ကျေးဇူးရှင် အဖြစ် ရယ်ကို
တကယ်တော့… ဆည်ပိတ်မှ ရေချိုထိန်းနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး…
နေရာမှားရင် မြေအောက်ကျောက်လွှာချပ်ကြားတွေက ရေစိမ့်ပြီး (Seepage)… သဘာဝအခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်… (ဥပမာ… ငလျင်)
ဆည်ရေဝပ်နေရာ (Catchment Area) မှာ ရေအလေးချိန်ကြောင့် ဖိအားပိုမိုသက်ရောက်ပြီး မြေအောက် ဆားအလွှာတွေ စိမ့်ရေနဲ့ မြက်နှာပြင်ပေါ်ကို ပျော်ဝင်ပြီးတက်လာတတ်သလို ၊ လှောင်ထားတဲ့ရေတွေလည်း နေအပူချိန်မှာ အကုန်ခမ်းခြောက်ကုန်ပါတယ် (ဥပမာ… ကြက်မောက်တောင်ဆည်)…။ နောက်ပြီး မြေလွှာ ပြတ်ရွေ့တွေကြားထဲရေဝင်သွားရင် အဆက်မပြတ် ငလျင်လှုပ်တော့မှာမို့ ၄တိုင်စင်ပေါ်တက်နေရသလို မတွေးရဲစရာပါ ။
မြစ်ရေနဲ့ မြစ်ကမ်းကိုထိန်းတာ မြစ်ဘေးကသစ်တောနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပါ ။ မြစ်ကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ၊ မြစ်ရေတင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ၊ မြစ်လက်တက်များကို (မြစ်မကြီးမဟုတ်) တမံဖို့ ဆည်ပိတ်တာတွေ နဲ့ မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ် ။ ( မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေအရင်းအမြစ်ဋ္ဌာနက ဆီဖိုးပိုရအောင် မြစ်ရေတင်စခန်းတွေကို အမြင့်ဆုံးကုန်းပေါ် ထိုင်သတဲ့လေ… )
အဲဒါမှ… မြစ်ကြမ်းပြင်အောက်က သဘာဝရေလှောင်ကန် (River Basin) ကို ရေမခမ်းအောင် ထိန်းနိုင်မှာပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံ မုံရွာနားမှာ River Basin ကြီးရှိပါတယ် ၊ အဲဒါကြောင့် မုံရွာမြို့မှာ သစ်ပင်ကြီးတွေပေါပြီး အပူသက်သာတာပါ ။ River Basin တွေကိုသုံးတတ်ရင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး ။
ဥပမာ ပြရရင် အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ နိုင်းမြစ်အောက်က သဘာဝရေလှောင်ကန်ကို စွေစောင်းဖောက် ၊ ရေတင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တာပါ ။
ဧရာဝတီဟာ မြောက်ကနေတောင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်ပြီးစီးဆင်းနေတာမို့ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် သဘာဝကပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါ ။ အဲသလိုပါပဲ… စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ပေါ်ထိုင်ထားတာမို့ အန္တရာယ်လည်း အလွန်ကြီးပါတယ် ။ အဲဒါကိုပိတ်… ဆည်ဆောက်ပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့တစ်လုံး ရွှေဥ ဥပေးတဲ့ “ငန်းမြွေ”ကို သတ်စားတယ်ပြောဖို့ကလွဲလို့ အခြားမရှိ ။
အဲသည်တော့… မြစ်လက်တက်တွေကို သင့်သလိုစီမံ ၊ ဧရာဝတီကိုထိန်း ။ လျှပ်စစ်လိုချင်ရင် ညူကလီးယားစက်ရုံတွေ ၊ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတွေတည်… လာကန့်ကွက်ရင် G-8 ကို ထောက်ပံ့ခိုင်း ၊ BioThermal, GeoThermal လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံတွေဆောက် ။ နိုင်ငံခြားငွေလိုချင်ရင်တော့ ဘဘကြီးတွေ ပိုင်သမျှ အကုန်သာသိမ်းလိုက်…
” ၁၀ သက်… ၁၀ သက် ”
ဆြာကျောက်စ်ကြည့်ရတာ… ညူကလီးယားကို.. အထင်သေးပုံရတယ်..။
ဂငယ်ဂျပန်တွေ.. ရကောက်ရုရှားတွေ.. တချက်စီပဲထိလိုက်တာ.. အခုထိနာလံမထ..။
မြန်မာတွဗရမ်းဗတာလုပ်ပုံနဲ့.. ရှိတဲ့အတတ်နဲ့… နှခေါင်းပေါက်၎ခု.. လက်၁ချောင်းနဲ့.. မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေမွေးကုန်ပါဦးမယ်ဗျ…
စကားအတင်းစပ်သတင်းရေးပြရရင်.. ကမ္ဘာ့မိုက်တီးမြစ်ကြီး ၈ခုခမြာ.. ပင်လယ်ထွက်ဖို့ရေမရှိ/မကျန်ရစ်လောက်အောင်..ဆည်တွေဆောက်.. ရေတွေယူပြီး.. လူတွေ.. ၀ိုင်းသမလိုက်ကြသတဲ့..။
ဒါက.. နောင်အနှစ်၂၀လောက်ဆို.. နိုင်ငံတိုင်း..မြစ်တိုင်း.. ဖြစ်တော့မှာ..။
8 Mighty Rivers Run Dry From Overuse — National Geographic
The Aral Sea was originally fed by two of Central Asia’s greatest rivers, the Amu Darya in the south and the Syr Darya in the north. The former is the longest river
Jan 27, 2014 – The World is atacritical crossroads. The Fukushima disaster in Japan has brought to the forefront the dangers of Worldwide nuclear radiation.
သဂျီးရယ် Pandora Box ထဲက ညူကလီးယားကို အထင်မသေးဝံ့ပါဘူး…
ချာနိုဘိုင်းလည်းမှီတယ် ဂျပန်ဆူနာမီလည်းမြင်ရတယ်… ။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ၁၉၉၉ခုနှစ် ၊ ထိုင်းမှာ ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ယူယေနီယံ ကို မှား ခိုးမိတဲ့ သူခိုး ၂ယောက် အသားတွေ တစ်စစီပဲ့ကျတာလည်း မြင်ဖူးတယ် ။ ဘယ်သူမှ ဘာမှလုပ်ပေးလို့ မရ … ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှာစိုးလို့ အနားတောင် မကပ်ရဲကြဘူး ။ ကျောက်စ်ရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်တောင် ချင်းပြည်နယ်အစပ်မှာ ယူယေနီယံ အရှာကောင်းလို့ အသက်ပေးလိုက်ရတာ… ( ဒါတောင် သန့်စဉ်ပြီးသားမဟုတ် ) အဲဒါကြီးကို ကြောက်မှကြောက်…။
အဲ့သည့်လိုပါပဲ ရေရှည်နဲ့ ရေတိုသာကွာတာ ၊ ဧရာဝတီကို ဆည်ဖြတ်ပိတ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး အနှေးနဲ့အမြန် ဘဝပျက်ရမှာမို့ သဘောမတူနိုင်တာပါ ။ သဂျီးစကားနဲ့တော့ Fiction ပေါ့ …။ ဒါပေမည့် Fact မဖြစ်ခင် ၊ အတိမ်အနက်ကို သိတဲ့သူတိုင်း မီး ဆိုတာ လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်မှ မဟုတ်ဘူးလေ ။ တစ်ခုလိုချင်တစ်ခုပေး… အခုလည်း ဒီမှာ ကျောက်မီးသွေးကနေ လျှပ်စစ်ထုတ်တာမို့ Black Rain ရွာရင် သီးခံရတာပဲ ။ Black Rain က အိမ်ပြင်မထွက်ပဲနေလို့ ရသေးတယ် ၊ ဆည်ပိတ်လို့ ကျတ်တီးမြေဖြစ်ရင် နိုင်ငံပါပြောင်းပြေးရမှာ ။ နောက်ပြီး အဲသည့်လောက် မီဂါဝပ်ထွက်ဖို့ တင်ရမည့် ဆည်အမြင့် (Hydrostatic Head) ကို ကြည့်ဦးလေ ။ မတော်တဆ ငလျင်လှုပ်ပြီး ဆည်ကျိုးကျရင်လည်း အညာမှာနေပြီး Titanic ဓာတ်ရှင် ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်နေရမယ် ခင်ဗျ ။
ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း မြစ်လက်တက်တွေကို ဆည်ပိတ်တာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နည်းတာမို့ လက်ခံလို့ရပါတယ် ၊ ဧရာဝတီကို မလုပ်သင့်တာပါ ။ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတဲ့ သံလွင်၊ တာဆန်းစီမံကိန်းတောင် ထိုင်းတွေ ဆက်မလုပ်ရဲဘူး ။ မြန်မာပြည်ကို စေတနာရှိလို့မဟုတ် ၊ ဖြစ်လာရင် သူတို့လည်း အမြည်းစားရမှာမို့ပါ ။ ကြုံလို့ ပြောရရင် မဲဆောက်ရေကြီးတိုင်း မြဝတီကို ထိုင်းတွေ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းပို့ပေးတာ ကျေးဇူးတင်စရာမဟုတ် ။ အပေါ်က “Bhumibol Dam” ကြောင့် … သူတို့ အပြစ်ကိုသူတို့သိလို့ ခင်ဗျ ။
တကယ် ဖြစ်သင့်တာက လျှပ်စစ်လိုချင်ရင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (အော်ဂဲနစ် အမှိုက်) တွေက ထွက်တဲ့ မီသိန်းဓာတ်ငွေ့နဲ့ လည်ပတ်တဲ့ တာဘိုင်တွေကို စဉ်းစားသင့်တယ် ။ တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်လောက်ပြတ်သဗျ ။ အမှိုက်လည်းရှင်း ၊ လျှပ်စစ်လည်းရ ၊ ဓာတ်မြေဩဇာတောင် အပိုထွက်သေးတယ် ။ နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီးက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့ တစာစာအော်နေတဲ့ G-8 နိုင်ငံတွေက ညှစ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ ။ အဟဲ… ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ၊ ဒါမပေးရင် ဒါလုပ်မယ်လို့တော့ နိုင်ငံရေးကစားပေါ့ဗျာ ။
ထင်တာကတော့.. ခါကာဘိုရာဇီဖက်ကနှင်းတောင်တွေ ကမ္ဘာပူလာလို့အရေပျော်ကုန်တာမှာ.. မေခနဲ့မလိခက.. နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရေချိုတွေထုတ်ပေးနေပုံရပါတယ်.။
ဒါက.. ဓါတ်ပုံနဲ့မပြနိုင်ပေမယ့်.. ဟိမ၀န္တာတောင်ကြောမှာ..ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာမို့.. Fact..
ဒီတော့.. ရေတွေမကုန်သွားအောင်. မြစ်ညှာကနေ..ဆည်..ခတ်လတ်လတ်လေတွေဆောက်ပြီး.. လျှပ်စစ်နည်းနည်းပဲထုတ်…။
ငလျှင်ဒဏ်သိပ်မခံရတဲ့ နေရာတွေမှာ.. ဆည်ခတ်များများဆောက်သွားဖို့ပါပဲ..။
စိနပြည်ကိုပေးမလုပ်ချင်တာ..လုပ်ချင်တာ..။ ယူအက်စ်လုပ်စေချင်တာ..မတာ..အသာထားပြီး… ကိုယ့်တိုင်းပြည်..လူအများစုအကျိုးစီးပွားတည့်တည့်ကြည့်ရမှာလို့ထင်မိတယ်..။
တကယ်တိတိကျကျသိချင်တာမို့.. လူထုကတကယ်တောင်းဆိုရမှာက… လွတ်လပ်တဲ့တတိယအဖွဲအစည်းတခုခုကိုငှားပြီး.. အစွဲအလန်းကင်းတဲ့.ဆာဗေးလုပ်ဖို့လို့ထင်မိတယ်.။
သတင်းတွေအရ.. သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ.. ဧရာဝတီဟိုဖက်ကမ်းရွာက.. ဘုမကို.. ဒီဖက်ကမ်းရွာကအောင်ဘုက..ညတွင်းချင်း.. ၂ပေအတိမ်ရှိတဲ့..ဧရာဝတီမဟာ့မဟာမြစ်ကြီး.. ဖြစ်ပီး..ထမ်း…ခိုးပြေးနိုင်မယ့်ပုံ..
ဒီလိုသားသားရဲ့.. ဟိုးအရင်က..ဒီနေရာမှာ ဧရာဝတီဆိုတဲ့..မြစ်ကြီးရှိခဲ့ဘူးသပေါ့ကွယ်ဆိုပြီး.. ဖုန်းဆိုးမြေသဲကန္တာရကို..လက်ညိုးညွှန်ပြောနိုင်မယ့်ပုံ..
ဆည်မဆောက်ထားဘူးနော.. ဆည်မဆောက်ထားဘူး..။ ဆည်ဆောက်မယ်..ဆိုတိုင်း.. ဘုမတို့တွေ..အောင်ဘုတို့တွေ.. ယူအက်စ်ကချွန်တွန်းပေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအော်ဆန္ဒာပြထားသမို့.. ဘာမှမတို့..မထိ.. ဒီအတိုင်း..အရင်အတိုင်း..။
ဟိမဝန္တာက ရေခဲတွေ အရည်ပျော်လို့ မေခနဲ့ မလိခကတဆင့် ရေချိုတွေ ဧရာဝတီထဲကို စီးဝင်တာပေါ့ ။ အဲသည့် မြစ်ရေက နုံးတွေကိုပင်လယ်ဝမှာပို့ချလို့လည်း ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဆိုပြီး ဖြစ်တည်လာတာပါ ။ အဲဒါကို မြစ်ညှာမှာ ဆည်ပိတ်ပြီး သိမ်းလိုက်ရင် ရေချိုကန်တော့မဖြစ်ဘူး ၊ Stagnant Water တွေနဲ့ နုံးကန်ပဲ ဖြစ်တော့မှာပေါ့ ။ သဂျီးအလိုအတိုင်း ဆည်သာပိတ်လိုက်ရင် “အောင်ဘု” က “ဘုမ”ကို ဧရာဝတီ မြေသားလမ်းမကြီးအတိုင်း စက်ဘီးနင်းပြီး မြစ်ကြီးနားကို ခိုးပြေးရင် လွယ်မှလွယ် ။
ကြုံလို့ပြောရရင် ဟိမဝန္တာတောင်ကြောရဲ့ အချို့အပိုင်းတွေက “သက်ရင့် အနည်ကျကျောက်” တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ သူလည်း ဘူမိဗေဒအလိုအရ Plate Tectonic ၊ သမ္မာကျမ်းစာအလိုအရ ရေအောက်ရောက်ဖူးတာပေါ့ ။ မြစ်ဆိုတာလည်း ထာဝရမမြဲသောတရားမို့ အချိန်တန်ရင် မြစ်ပြုဆင့် “River Terrace” ကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ မြစ်ကျိုးအင်းတွေဖြစ်ပြီး မြစ်ကောရမှာပဲလေ ။ အဲဒါကြောင့် မြစ်ကြီး အသက်ရှည်စေချင်ရင် သောင်တွေကိုရှင်း စိုက်ပျိုးမြေတွေလုပ် ၊ ရေလမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ ။ ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းပူနွေးလာတာကတော့ လူ့ပယောဂပဲလေ ။ အဲဒါကို ရေချိုထိန်းပြီး ကန်ကြီးတည်လိုက်ရင် “Greenhouse Effect” နဲ့ ပိုပြီး ပူယုံပဲရှိတော့မှာပေါ့ ။
“River Terrace” ကလည်း သိပ်ပူစရာမရှိပါဘူး အချိန်တန်ရင် မြစ်အသစ် ပြန်ဖြစ်ပါတယ် ၊ အဲ… နှစ်ပေါင်းတော့ ထောင်ချီတာပေါ့ ။ ဧရာဝတီဆို မြစ်ပြုဆင့်ကို ၅ခါ အနည်းလေး ဖြတ်သန်းပြီးပြီ ခင်ဗျ ။ အဲသည်တော့ ဧရာဝတီကို ဥပစ္စေဒကကံနဲ့ သေစေချင်ရင်ဆည်သာပိတ် ၊ ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲ သေစေချင်ရင် လွှတ်ထားလိုက် ၊ အသက်ရှည်စေချင်ရင် မြစ်ကြောင်းထိန်းပေါ့ဗျာ ။ ရေချိုလား… စိတ်မပါပူနဲ့ ၊ ဧရာဝတီမသေသေးရင် မြစ်အောက် “River Basin” တွေကနေ ထုတ်လို့ ရပါသေးတယ် ။ အဟဲ… သဂျီးတို့ အမေဂျီးကားက မြစ်တွေနဲ့မတူတာက ဧရာဝတီမှာ မုတ်သုံလည်းရှိ ၊ အောက်ခြေ ဘူမိဗေဒအနေအထားလည်း မတူတာမို့ မြစ်ကြောင်းသာထိန်း ၊ ဆည်မပိတ်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မခမ်းပါဘူး ။
သဂျီးက “San Andreas Fault” ကို ညွှန်းလို့ပြောရဦးမယ် ။ “San Andreas Fault” နဲ့ “စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့” အလျားချင်း မတိမ်းမယိမ်း (ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကွာ) ဆိုပေမည့် ငလျင်လှုပ်ပုံချင်းမတူပါဘူး ။ “San Andreas Fault” က “Pacific Plate” ပေါ်ထိုင်ပြီး တောင်အရပ်ကနေ မြောက်အရပ်ကိုလှုပ်တယ် ၊ “စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ က “Indian Plate နဲ့ (ဆုမတြာ) Sunda Plate” ပေါ်ထိုင်ပြီး မြောက်ကနေ တောင်ကိုလှုပ်တယ် ။ မှန်ပါတယ်… ကိုလိုရာဒိုမြစ်ပေါ်မှာ ဆည်တွေ အများကြီးပါ ၊ ဒါပေမည့် အရွယ်အလတ်နဲ့ အသေးတွေပါ ။ ဒီလောက် နည်းပညာမြင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမေဂျီးကားတောင် ငလျင်လှုပ်လို့ အကြီးဆုံး “Hoover Dam” ကို ရေအပြည့် မဖြည့်ရဲဘူးလေ ။ နောက်ပြီး ဒုတိယအကြီးဆုံး “Glen Canyon Dam” ကိုတောင် ၁၉၈၀ခုနှစ်များဆီက သင်ခန်းစာရသွားတာမို့ ရေအပြည့် မဖြည့်တော့ပါဘူး ။ “ကိုလိုရာဒို” နဲ့ “ဧရာဝတီ” အောက်ခံ ကျောက်လွှာချင်းမတူလို့ အရာခပ်သိမ်း တန်းညှိလို့ မရနိုင်ပါခင်ဗျ ။
အသာလုပ်ပါ သဂျီးရယ်… “Force 10 from Navarone” ဓာတ်ရှင်ထဲကလို ဆည်ဖောက်ပြီး လုပ်ကြံလိုက်လို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ကား ကုန်ပါ့မယ် ။
(ဟီး… ကွကိုယ်တင်ရင် ဆွေးနွေးစရာ ပို့စ်တစ်ပုဒ် ရလောက်ပြီ)
ဘာမှမဟုတ်ဝူး လယ်ချောင်းယားလို့ ချောင်းဝင်ဟန့်ဒါ.. ဆက်ညင်း… အဲလေ.. ဆက်ပြောဂျပါ…
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့သာ ဝန်ဂျီးဂျုပ်ဒေဆိုရင်
. ဧရာဝတီကို အငယ်ခံ လက်ပူတိုက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့
. အမေဒိဂန်တွေ လုပ်မယ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံက
. အဲ့သည် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ နှက်လိုက်သလားလို့
. ဘါဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျော်ကတော့နားမလည်ပါဘူး
. မျက်နှာက ဒဏ်ရာကို လိုအပ်လို့ ဖင်အသားလှီးပြီးကုတာက
. ဖင်မှာပွေးပေါက်တာကို နှလုံးသားကြီးခွဲထုတ်ပြီး
. ကုတဲ့သဘောတော့ မဖြစ်စေခြင်ကပါဘူး
. ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုတာက သပ်သပ်ထင်ဘါဒယ်
. အောင်ဘုက သွားခိုးဖို့နေနေသာသာ
. အောင်ဘု ပတ်ပြေးနေရတာ ဘယ်ဒူသိလို့လဲ
. ကြားလို့မှကောင်းဂျသေးရဲ့လား အရပ်ဂဒို့
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဖေဖော်ဝါရီ က လည်း ကဗျာမဆန်လိုက်ဒါ…
ဆည် ဒွေ ကန်ဒွေ မြစ် ချောင်း အင်း အိုင် ဒွေ ပါ ရားးးဟိဟိ (စတာ နောက်တာ အတည်ကြောဒါ..)
တိုင်းပြည်က နုနု မုန်တိုင်းက ထန်ထန် (စာအုပ်နာမည် :P) ဆဲပေါ့…
ဘာဒွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းပြောင်း
ကင်းတားဆည် ရေ ထိန်း တံခါး ဖွင့်ချတာလေးသူကြီးကိုမြင်စေ ကြုံစေချင်လိုက်တာ
ဆည်တော်ကြီး ရေထိန်းတံခါး ဖွင့်ချတုန်းက အောင်ပင်လယ် မှာ ရှိစေချင်လိုက်တာ
ကျိုးမှာစိုးလို့ဖောက်ချ ရေမျက်နှာပြင် လျော့ချတာ ပဲရှိသေးတယ်။
မြစ်ဆုံ နဲ့ အဲဒီဆည် အရွယ် ဘယ်ဟာက ဘယ်လောက်ပိုကြီးမလဲမသိ။
မန္တလေး မြို့သစ်သင်ပန်းကုန်း ဘက် မှာ နှစ်တိုင်း ဆည်တော်ကြီးက ရေတွေကြောင့် ကလေးတွေသေ
ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်သာလုပ်မယ်ဆိုရင် အရှေ့ဘက်ရှမ်းရိုးမနဲ့
အနောက်ဘက် တောင်တန်းဒေသတွေ မြေဈေးတတ်မယ်ထင်တာပဲ
ဧရာဝတီကို ဆည်တွေအဆင့်ဆင့်… အများကြီးဆောက်.. ရေချိုတွေကိုလူ့သားစွမ်းအားနဲ့ ထိမ်းကြမယ်ဆိုရင်တော့… မြန်မြာ့ပည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့ ဂျီဒီပီ .. အနှစ်၂၀အတွင်း.. လက်ငါးချောင်းနဲ့.. ငါးဆ..ငါးဆ… သေချာပေါက်တက်တယ်..။
ဒီခေတ်ဒီအခါဟာ.. မိခင်သဘာဝဆိုပြီး.. သဘာကို.. သဘာဝအတိုင်းပြစ်ထားလို့ရတော့တဲ့..ခေတ်မဟုတ်..။
March 22 is World Water Day,atime to reflect on the state of the world’s freshwater. The Colorado River is one of the most used and contested waterways on Earth. It provides water for 30 million people, and has many dams and diversions along its 1,450 miles (2,333 kilometers).
Because it is so heavily tapped for agriculture, industry, and municipal uses along its course, the Colorado River rarely reaches its delta and the Gulf of California. About one-tenth of the river’s former flow now makes it to Mexico, but most of that is used for farming and cities south of the border.
့ပုံကတော့ ကိုရိုရာဒိုမြစ်ရဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တနေရာပါတဲ့..။
မြစ်ကတော့ သေသလောက်ပါပဲ.။ လူသန်း၃၀ကို အလုပ်အကြွေးပြုနေတယ်လေ… ။
ကိုလိုရာဒိုမြစ်ကြီးဟာ.. ဧရာဝတီ (Length 2,170 km (1,348 miles) ထက်နည်းနည်းပိုရှည်ပါတယ်..။
အမှတ်မမှားရင်..ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟာ.. စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောထက်ကြီးတဲ့ ပြတ်ရွေ့ပေါ်မှာရှိပါတယ်..။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက် မြင့်မားနေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လျှပ်စစ် ၈၂ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ရုံ တည်ဆောက်ရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် အမေရိကန် အခြေစိုက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အလျင်အမြန် ထုတ်လုပ် အသုံးပြုရေး နယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့ရှေ့တန်း ရောက်နေသည့် ARP Energy ကုမ္ပဏီတို့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ကြောင်း ARP Energy ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
အဆိုပါ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ၈၂ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး စက်ရုံကို မြန်မာ့လျှပ်စစ် စွမ်းအင်လုပ်ငန်း (MEPE) အတွက် ARP Energy ကုမ္ပဏီက ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
“ဖွံ့ဖြိုးစ ဈေးကွက်တွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်ရင် စိန်ခေါ်မှု အများကြီး ကြုံရပါတယ်။ အဓိက စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မူဝါဒ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ အခြေခံ အဆောက်အဦ စိန်ခေါ်ချက်တွေကို ရပ်ဆိုင် ဖြေရှင်းရေး၊ နိုင်ငံစီးပွားရေး အလားအလာတွေကနေ အကျိုးအမြတ် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရေး စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်မှု၊ အခြေခံမူတွေအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု စတဲ့ ချဉ်းကပ်နည်းတွေက အဲဒီလိုမျိုး အားထုတ်မှုတွေကို ကူပံ့ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ပြောကြားသည်။
ဆြာကျောက်စ်က ပညာရှင်မို့.. ပညာရှင်နဲ့ပြိုင်မငြင်းပဲ.. အချက်အလက်(သတင်း)တွေထုတ်ပြန်သွားပါ့မယ်..။
ဒီဇတ်လမ်းမှာ.. လူထုက..ဘာလုပ်သင့်သလည်း.. ပုံပေါ်လာမှာပေါ့..။
ဂန့်ဂေါလုံချည် အ၀ယ်လိုက်ပေမယ့် ထုတ်လုပ်မှုမှာ အခက်တွေ့နေတဲ့ သတင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်၊ ဂန့်ဂေါမြို့မှာ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ဂန့်ဂေါလုံချည် ထုတ်လုပ်မှုဟာ ၀ယ်လိုအားကို ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ ဒေသခံ ရက်ကန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေ ထံကနေ သိရပါတယ်။ ယခုဝယ်လိုအား ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိတာကလည်း လျှပ်စစ်မီးမရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် စက်ယက်ကန်းကို အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ လက်ယက်ကန်းကိုသာ အားထားပြီး ယက်လုပ်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်
၆) ရေဝေရေလဲသစ်တောတွေ မဖျက်ဆီး/မပျက်စီးဖို့လိုသည်။
အဲဒီ၆ခုကို တပြိုင်ထဲဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး… တခြားနှိုင်းယှဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွေထက်.. သာတဲ့နည်းလမ်းတွေးလို့ရရင်တော့.. ကောင်းတာပေါ့..
သဂျီးဇုတ်… ဧရာဝတီဆိုတာ မြန်တျန့်ပြည် နှလုံးဝိညာဉ် အသက်သွေးကြောဗျ…။ မြစ်ဆုံဆည် ဆောက်ဖြစ်လို့ တရုတ်ကူမြူ နစ်ကြီး အဲဒီဆည် ဗုံးကြဲ တနိုင်ငံလုံး ရေမြှုပ်ပစ်မှာ မကြောက်လား.. အခုတောင် ဝတွေကို ဗုံးကြဲလိင်ဗျံတွေ ပေးတော့မယ်..။ ခီဗျား မဟုတ်မမှန် ဝါဒဖြန့်နေတာ ရပ်တန်းကရပ်.. နို့မိုလျင် သမီးဒေါ်ဂလေး ကာလာဓာတ်ပုံ တင်လိုက်မည်။
အခု အစိုးရက New York Convention ကို လက်မှတ် ထိုးလိုက်ပြီနော် ။
International Arbitration Court ကို လက်ခံလိုက်ပြီ ။
အဲဒီ အဓိပ္ပါယ် က ရှင်းရှင်းလေးဘဲ ၊
မြစ်ဆုံဆည် မ ဆောက်ချင်ရင် ဒေါ်လှ ၂ ဘီလျှံ လျော်တော့ဘဲ ။
တိုင်းသူပြည်သားတွေ အခုကတည်းက လျော်ဖို့ ငွေ စုထားကြ ။
Myawady News မှာတွေ့လိုက်တဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်
အမေရိကန်နယူး ဂျာစီပြည်နယ်က အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူက မိဘတွေကိုပြန်ပြီး တရားစွဲ လိုက်ပါတယ်။ရေချယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးက မိဘတွေ သူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကမောင်းချလိုက်တယ် လို့ စွပ်စွဲပြီး ကျောင်းစရိတ်နဲ့ နေထိုင်စရိတ်တွေ အတွက် မိဘများကိုတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေကသူ့ အပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလွဲမှားစွာဆက်ဆံခံခဲ့ကြပြီး ဒါတွေအဆုံး သတ်ဖို့ အတွက်အိမ် ကဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ် တယ်လို့ ရေချယ်ကပြောပါတယ်။ သူ့ မိဘတွေဟာ တစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာသုံး သိန်းကျော် ရှိကြောင်း၊ အခု ကျောင်းနှစ်တစ်ဝက်မှာ သူ့ ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ ကျောင်းစရိတ်ကိုမပေးတော့ကြောင်း သူ့ အမေ ကသူ့ဖက်တီး၊ ၀က်ပုပ်စ သဖြင့်ခေါ်ပြီး အဖေကိုသူ့ ကိုရိုက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်၊ ရည်းစားနဲ့ တွေ့ခွင့်ကိုတားမြစ်တယ်၊ စကောလားရှစ် ရဖို့ ဖိအားပေးတယ်၊ နောက်မင်္ဂလာဆောင် မှာ သူအရက်မူးတဲ့ကိစ္စ စတာတွေ ကို ပြောပါတယ်။
သူ့ မိဘတွေက ရေချယ်ကို အိမ်ကမောင်းချတာမဟုတ်ကြောင်း၊အိမ်မှာ အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ကိုင် ဖို့ နဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ချက်စတာတွေကိုမလိုက်နာနိုင်တာကြောင့် သူ့ သဘောနဲ့ သူအိမ်ပေါ် ကဆင်း သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဖခင်ရှောင်က “ကျနော်တို့ ဟာ ကိုယ်သမီးက ကိုယ့်ကိုတရားပြန်စွဲတာခံရတယ်။ ဘာမှမပြောနိုင်အောင် ဆွံ့ အသွားတယ်ဗျာ။သူ့ အမေလည်းဒီလိုပဲ။ ကျန်တဲ့သမီးတွေလည်းဒီလိုပဲခံစားကြရတယ်။ အိမ်မှာနေတာ အိမ် အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာလည်း အသေးအဖွဲလေးတွေလုပ်ခိုင်းတာပါဗျာ။ ညဖက်ကိုအ်ိမ်ပြန်ချိန် ကာဖျူးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလည်း ည၁၁ နာရီနောက်ပိုင်းထက်ကျော်ပြီး အိမ်အပြင် မှာမနေဖို့ ပြော တာပါ” လို့ ဆိုပါတယ်။
” ကျနော်အ်ိမ်မှာနေပြီးကျနော့်စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာလို့ သူ ဘာအခွင့်ထူးတွေရမလဲ။ ပုဂ္ဂလိကျောင်းမှာတက်ရမယ်၊ကားအသစ်စီးရမယ်။ကောလိပ် ကျောင်းတက်ခွင့်ရမယ်ဗျာ။ဒါပေမယ့် အိမ်ရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကိုတော့လိုက်နာရမယ်။နည်းနည်းတော့တင်းကျပ်တာပေါ့ဗျာ” လို့ ပြောပါတယ်။
အဖေနဲ့ သမီးကတရားရင်ဆိုင်နေတုန်းနားတဲ့အချိန်မှာစကားပြောဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူ အဲလိဇဘက် ကတော့ငိုပါတယ်။
နယူးယော့အခြေစိုက်ကလေး၊ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ မိသားစုဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်ဂျင်နီဖာက “ဆယ်ကျော် သက်ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ တချိန်ထဲမှာပဲ ကလေးတွေအတွက်လည်း ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀ဆိုတာ ပန်းခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတာမဟုတ်ပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
တရားရေးအဆုံးအဖြတ်ခံယူတာကောင်းတယ်လို့တော့ ထင်တယ်..။ ဒါပေမယ့်.. သမီးက အမှုနိုင်မယ်လို့တော့ မထင်..။
ခုလိုချိန်ခါမျိုးမယ် …လျှပ်စစ်တွေ ရေအား တွေ …ကျောက်မီးသွေးတွေ ဖတ်ရတာ အသီးနာ လှသဗျာ….
ဒီပိုစ့်ကို. .. ဖယ်ဖျော်ရီ အတွက် (တကိုယ်တော်) တောက်ညင့်ကပ်စာ အကောင်းဆုံး ပိုစ့် အဖြစ် ရွေးသဗျာ…
စမ်းချောင်းမယ် ..ကန်ရာချောင်း ဆိုတဲ့ မြောင်းကြီးရှိဖူးသတဲ့ …. ရေနှုတ်မြောင်းကြီးပေါ့…
(၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတောင် ကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ဗုံးတွေ ဘာတွေ တွေ့တုန်းရယ်.. ကလပ်စီကယ်မြောင်းကြီးပေါ့)
ဦးကြီးတွေ (ယခု အသက် ၆၀တန်း) ချာတိတ်ဘ၀က အဲ့မှာ ရေဆင်းကူးလို့ ရေ နစ်လို့ ရှိရင်
မအေ လုပ်တဲ့လူ မြစ်ဝမှာ တရှုံ့ရှုံ့ နဲ့ သွားငိုပီး အလောင်းကောက်ပေရော့ …အဲ့လောက် ရေစီးကြမ်းသတဲ့…
ဦးလေးတွေ (ယခု အသက် ၄၀တန်း) ကလေးဘ၀မှာတော့ ..လူကြီးတွေက ရေသွားဆော့ရင် ကြိမ်းရုံသာ ကြိမ်းတော့သတဲ့…။
ကျော်တို့ ကလေးဘ၀မတော့ ..အဲ့သည့်မြောင်း က အမှိုက်ပစ်တဲ့ မြောင်းကြီး …ဟီးဟီး….။
အကျိုးဆက်ကတော့ … အာရှတော်ဝင်နောက်ဘက် အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မယ်.. မိုးကြီးရင် ရေ မြုပ်တာ နှစ်တိုင်းရယ်.။
သိပ်မမြုပ်ပါဖူး ..တခါသား မိုးတွင်း လူတယောက် ညာဘက်လက် ကို ဘေးကိုဆန့် ဘယ်ဘက်လက်ကို ညာဘက် ခါးနားဆန့်ပီး
ရင်ဆို့လောက်ရှိတဲ့ေ၇ထဲ ကိုးလိုးကန့်လန့် လမ်းလျောက်လာတာ … ဘယ့်နှယ့်များပါလိမ့်ပေါ့…
ဘယ့်နှယ့် ..စက်ဘီး တွန်းလာတာကိုး ….။
ထားပါတော့လေ ကန်ရာချောင်း.. အနှီချောင်း (မြောင်း) ကြီးက အလုံသစ်တောဝင်း ဘက်… (ယခု ဂက်စ်အိုးတွေထုတ်ပေးရာ)
ကို ပေါက်သဗျ… အဲ့သည့်မှာ ရန်ကုန် ရဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးက အမှိုက် တွေ … အဲ့လေ ရေနှုတ်မြောင်းတွေ …
ရေကျော်မှာ ရေကျော်တာ … မြို့ထဲနေ ၀ဲပေါက်တာ ..သိပ်တော့ မဆန်းကျယ်….
အဲ့ရေချို တွေ ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ကို တခုခု အသုံးချနိုင်ခဲ့ရင် ဆိုပီး အမြဲတွေးမိပါတယ်..
ဒီနေရာမှာ စကားစပ်လို့ … မာရုနိုအုချိ ဆိုပီး ဂငယ်တွေ မြို့ကို ခရုပတ် မြောင်းဖောက် မြောင်းကြောင်း ထိန်းသိမ်းပီး
စနစ်တကျ ရေထုတ်တာ သွားသတိရတယ်….။ အဲ့ရေတွေကိုလည်း အလဟသတ် မဖြစ်စေဖူးခည..
(သည်အကြောင်း သေချာ ပြန်ဖတ်ပီး ကြုံရင်ေ၇းပါဦးမယ်..)
ရေထုတ်ဆိုလို့ ..ဒီဇင်ဘာတုန်းက … တိုကီယို ဒန်းဟတ်ဆု အောက်က ဟိုက်ဒရို ထုတ်တဲ့ တောင်တလုံးဆီရောက်ခဲ့တယ်…
ဟိုက်ဒရိုနဲ့ ပါတ်သတ်ရင် …လားလား ..ဒင်းတို့ နွေက ကျုပ်တို့ မိုးလိုပဲကိုး
နွေမယ် ပူလို့ ..ဖူဂျီယာမ ကပျော်ဆင်းလာမယ့် ရေထု နဲ့ လျှပ်စစ် ထုတ်တာလေ….
တောင်ကိုဖောက် ဒမ်ဆောက် ..အပေါ်အောက် ကို ဂရက်ဗတီ နဲ့ တာဘိုင်လှည့်ပီး လျှပ်စစ် ထုတ်တာ …။
ဒီနေရာမှာ ပြောစရာ တခုရှိတာ က သူရို့ … ဆီက လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ … ဖုန်းလိုင်းများလိုပဲ…
နေ့ ဘယ်ဈေး ည ဘယ်ဈေး ဆိုပီး wave လေးရှိသဗျ….။ လူသုံးများတဲ့အချိန် သုံးရင် ဈေးကြီးပီး လူသုံးနည်းတဲ့အချိန်သုံးရင်
ဈေး သက်သာတယ်တဲ့ ..(ဒါကတော့ ဖုန်းနဲ့ ဇောက်ထီး ဖြစ်လိမ့်မယ်..)
သိပ်မကြာခင် ဒီမှာ အနှီ လှိုင်းမျိုး ပေါ်လာအံ့ ဆိုရင်တော့ အံ့သြမိမယ်မဟုတ်ပါ…
(ဖျောင်းတိုင်တွေ ထွန်းကြရင်လည်း ဟီဟိ…)
ဆိုတော့ ..အနှီ လှိုင်း ကလေး ရှိနေတာကို သုံးပြီး ကျေးဇူးရှင်များက ဟိုက်ဒရိုက ရတဲ့ ပါဝါကို ဈေးကြီးတဲ့အချိန် မှာ ထုတ်ရောင်းစားပါသတဲ့…
ဈေးပေါတဲ့အချိန် ကျတော့ ..အောက်ကန် က ရေကို အပေါ်ကန်ဆီ …ရေမော်တာများမောင်းသလို လျှပ်စစ်တာဘိုင်နဲ့ ပြန်မောင်းတင်ပီး ..
နောက်တခါ ဈေးကြီးချိန်ရောက်ရင် ဂရက်ဗတီ ထပ်သုံးထုတ်ဖို့ ချောင်းပြန်သတဲ့ …ကွာတဲ့ ဈေး မာဂျင် ကို စားတယ်ပေါ့လေ..တယ်လုပ်စားတတ်သကိုး..။
လုပ်မစားတတ်လို့လည်း မရဖူးလေ… လျှပ်စစ်မ ထုတ်ရင်တောင် အဲ့ရေတွေကို စနစ်တကျ စွန့်ဖို့
ထိန်းကို ထိန်းရမှာ ကိုး ..မဟုတ်လို့ …ကတော့ …တိုကီယို ရယ်.. ယိုကိုဟမ ရယ် ..ရေအောက်ရောက်သွားမှဖြင့်…
အာရှ ရဲ့ ဖလောရင့်စ် အသစ်ကြီးကတော့ဖြင့်ဗျာ.. အမှိုက်ရှုပ် ..နေပူ မိုးများ ..ရေကြီး ကားပိတ် .. စရိုက်ကြမ်း …နားညီး ….ဖုန်ထူ
(ရန်ကုန်မယ် ..မြို့နယ်အလိုက် လျှပ်စစ် ပေးဖို့ ကန်ပနီ -၂၂ ထု ဆိုလား ဗျ … ပေးထားတယ်ဆိုပဲ ဟီဟိ…)
ဂျာနယ်ထဲ လေဒီယိုထဲ …မြင်ဖူးမျက်စိဝ ကြားဖူး နားဝ ပြောပါတယ်ဗျာ..
ကိုရင်တို့ စမ်းချောင်းကနေပါတ်ပြီးစီးလာတဲ့ ကန်ရာချောင်းက ဟုမ်းလမ်း ကျားကြီးဦးဘဆွေခြံဘေးကနေ အလုံကရင်ခြံကိုပါတ်ပြီး အခု အေးရှားဝေါဆိပ်ကမ်းအောက်ကနေ ရန်ကုန်မြစ်ထဲကိုစီးတယ် ခင်ဗျ ။ ကျောက်စ်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက မိုးရွာပြီဆို ရေဟုန်ပြင်းပြင်းမှာ မြောင်းထဲကအမှိုက်တွေ မြစ်ထဲကို ဝင်သပေါ့ဗျာ ။ အဲသည့်မှာ မြောင်းထဲရေဆင်းကူးလို့ မျောလာတဲ့ ခလာမသေးတွေကို အခု ကြည့်မြင့်တိုင် မြောင်းကြီးလမ်းနားက စောင့် ကောက်ရတယ်ခင်ဗျ ။ ဘယ်လောက်ရေစီးသန်သလည်းဆိုရင် တညသား အလုံ ဆင်ရေကန်လမ်း ကနေ ကြည့်မြင့်တိုင် ဝှိုက်တော (အခု သီတာရပ်ကွက်) ကို ကူးတဲ့ သစ်သား မြောင်းကြီးတံတားတောင် မြောင်းရေမှာမျောဖူးတယ် ။
အလုံ ဂတ်စ်အိုးဆိုင်ဘေးကနေ မြစ်ထဲကိုဝင်တဲ့မြောင်းက သက်သက်၊ ယခင် မစ်ရှင်ကုန်း ၊ အခု မင်းရဲကျော်စွာကုန်း ကနေဖြတ်စီးတာပါ ။ ကျောက်စ်တို့ ငယ်ငယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကြီးဆောက်တော့ ၊ လွှတ်တော် မိလ္လာလိုင်းအတွက် အဲသည့်မြောင်းနဲ့ဆက်ဖို့ တူးလိုက်တာ အလုံလမ်းမတို့ ၊ ယခု ငုဝါလမ်းတို့ ၊ မွစာတက် ပျက်စီးပါလေရော ။ ထားပါတော့လေ… အဲသည့်ရေနှုတ်မြောင်းကြီးတွေလည်း လူတွေက မြေဖို့ကျူးကျော် ၊ အမှိုက်ပစ်နဲ့ ကောသွားပြီ ။ အဲဒါကြောင့် မိုးကြီးတိုင်း ရေမြုပ်တာပါ ။
မြို့ထဲမှာရေကြီးတာကတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်က မြေအောက်ရေဆိုးမြောင်း ၂ခုကို ရှာမတွေ့လို့ (ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ မြေပုံမီးလောင်သွားတယ်) ၊ မရှင်းနိုင်တာမို့ မကြီးသင့်ပဲကြီးရတာပါ ။ နောင်များ အလျင်းသင့်ရင် အင်္ဂလိပ်ရဲ့ မြို့သစ်တည်နည်း (New Urbanization) အကြောင်း ရေးပါဦးမယ် ။ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ယခုအထိ မြို့သစ်တည်မယ်ဆို ရန်ကုန်ကို စံထားရတုန်းပဲ (အားနဲ/အားသာချက်) ။ ချင်ကျားဘိုဆို ကော်ပီကို ကူးထားတာ ။ အဲသဟာကြောင့် ရေချိုရေဆိုးတွေကို သူတို့မှာ ပြန်သန့်ပြီး သုံးလို့ရနေတာပေါ့… (ဤကား စကားချပ်) ။
မောင်ရင် ဂျာပွန်မှာတွေ့ခဲ့တာ Pumped Storage Hydropower Plant ပါ ။ လျှပ်စစ်ကို လူသုံးနဲတဲ့ ညဘက်မှာ Pump မောင်းပြီး တောင်ထိပ်က Man-made Reservoir Pond ကို ရေဖြည့်တယ် ၊ လူသုံးများတဲ့ နေ့ဘက်မှာ ရေပြန်ဖောက်ချပြီး တာဘိုင်ကိုလည် အပိုဆောင်းလျှပ်စစ် ထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာ ။ မြန်မာနိုင်ငံက ပုံတောင်ပုံညာမှာလည်း အဲဂလိုလုပ်ဖို့ဆိုပဲ ။ ထိုင်းက Lam Ta Khong Hydropower Plant ဆို နာမည်ကြီးပေါ့ဗျာ ။
ဆိုတော့… ရွှေမြန်မာများ ခိုးမစား လုမစားပဲ လုပ်စားတတ်ပါစေသတည်း…။
ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် River Basin Organization များ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပတဲ့ သတင်း
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Japanese Water Agency (JWA)နှင့် Network of Asian River Basin Organization(NARBO) တို့ ပူးပေါင်းပြီး Implement Intergrated Water Resources Management(IWRM) and Roles of River Basin Organizations အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ(၂၄)ရက် နံနက်(၉)နာရီက ရန်ကုန်မြို့ရှိ MiCaSa Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားမှာ အမျိုးသားအဆင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဟံစိန် မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသ သုတေသနအဖွဲ့ (ARBRO)ဥက္ကဋ္ဌ ကျွမ်းကျင်းပညာရှင် ဒေါက်တာဆွေဆွေအေးနှင့် Japanese Water Agency & NARBO မှ ကိုယ်စားလှယ် Mr.Shigeharu JIKAN တို့မှ ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မြစ်ဝှမ်းဒေသများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံရေးနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု အတွေ့အကြုံများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများက မေးမြန်းဆွေးနွေး အကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသားဆင့် ရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းလွင်ဦးက နိဂုံချုပ်အနေနဲ့ ရေနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း ပြောကြားပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲဟာ ညနေ(၃)နာရီမှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။
မိုးနည်းရပ်ဝန်း ဒေသတွေမှာ သောက်ရေ သုံးရေ ရရှိဖို့အတွက် လုပ်ငန်းစဉ် (၆)ရပ်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော် သွားမယ့် သတင်း
မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသတွေမှာ အဓိက သောက်ရေသုံးရေ ရရှိစေဖို့ အတွက် စီမံချက်ကို နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းထဲမှာ ပါဝင်စေပြီး ဦးစားပေး စီမံချက်တရပ်အနေနဲ့လည်း အကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းရဲ့ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း အစည်းအဝေးမှာ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းက ပြောကြားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အပူပိုင်း မိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ အစည်းအဝေးနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ဆွေးနွေးပွဲရလာဒ်တွေအရ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ “ရေ”ဟာ အဓိကဖြစ်နေပြီး ရေရှိတဲ့ ဒေသတွေဟာ ၀င်ငွေကောင်းပြီး ရေမရရှိတဲ့ ဒေသတွေဟာ ၀င်ငွေနည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သောက်ရေသုံးရေ ရရှိရေး စီမံချက်အရ မွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေရရှိရေး၊ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး၊ ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ ကျေးလက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်(၆)ရပ်ကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရဲ့ ပျှမ်းမျှမိုးရေချိန်ဟာ (၉၀)လက်မခန့်ရှိပြီး မြစ်ကြီး(၄)သွယ် အပါအ၀င် မြစ်ငယ်၊ ချောင်းငယ်တွေမှ စီးဆင်းတဲ့ မြစ်ရေထုထည် ပမာဏ ကုဗပေ(၅၈)သန်းရှိပြီး မြစ်ချောင်းများမှာ စုမိတဲ့ရေတွေဟာ အငွေ့ပျံခြင်းနဲ့ မြေကြီးတွင်း စိမ့်ဝင်တဲ့ ပမာဏဟာ (၆၂)ရာခိုင်နှုန်း၊ ပင်လယ်တွင်းသို့ စီးဆင်းတဲ့ ပမာဏဟာ (၃၈)ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီလို များပြားတဲ့ ရေထုထည် ပမာဏကို သောက်ရေ၊သုံးရေ၊ စိုက်ပျိုးရေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် နည်းပညာနဲ့ အရင်းအနှီး တတ်နိုင်ခဲ့ပါက ရေကြောင့် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဆင်းရဲမှု လျှော့ချရေးပြဿနာကို ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါသည်။
နောင်(၈၆)နှစ် အကြာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေအောက်ရေတွေ တဖြည်းဖြည်း ခမ်းခြောက် သွားတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ သတင်း
ကုလသမ္မရဲ့ တွက်ချက်မှုတွေအရ နောင်(၈၆)နှစ်အကြာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေအောက်ရေတွေ တဖြည်းဖြည်း ခမ်းခြောက်သွားတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။ အရပ်ဒေသတစ်ခုရဲ့ အပူချိန်ဟာ ပုံမှန်ထက် (၁)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တိုးလာပြီဆိုရင် အဲဒီအရပ်ဒေသမှာ ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို စတွေ့ရပြီး (၂)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်အောင် တက်သွားရင်တော့ အဲဒီအရပ်မှာ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တွေ တိမ်ကောသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပူချိန်(၂ဒသမ၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်အောင် တက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီဒေသက မြေအောက်ရေတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ခမ်းခြောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က (၂၀၁၂)ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ အတွက် သက္ကရာဇ်(၂၁၀၀)ပြည့်နှစ်မှာ တက်လာနိုင်တဲ့ အပူချိန်တွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခန့်မှန်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ အားလုံးလိုလို နောင်(၈၆)နှစ်အကြာ သက္ကရာဇ်(၂၁၀၀)ပြည့်နှစ်မှာ လက်ရှိ အပူချိန်ထက် (၄)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် တိုးမယ်လို့ ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီစာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အပူချိန် (၅)ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိအောင် အပူချိန် တိုးမြင့်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပုံမှန်ထက် (၂ဒသမ၅) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်ရင်တောင် အဲဒီဒေသရဲ့ မြေအောက်ရေတွေ တဖြည်းဖြည်း ခမ်းခြောက်သွားမယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ အတွက် နောင်(၈၆)နှစ်အကြာမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေအောက်ရေဆုံးရှုံးမှုကို ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ခန့်မှန်းတွေ့ ရှိနေရတယ်လို့ ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြစ်ချောင်းထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့ ရေသယံဇာတ ထိန်းသိမ်းမှုတွေကို နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်းပြီး အသိတရားနဲ့ ယှဉ်ကာ ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့ အချိန်မီ အစီအမံတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မပြုလုပ်ဘူးဆိုပါက ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ မြေအောက် ရေသယံဇာတတွေ ဆုံးရှုံးရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြစ်ကြီးတွေ ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ ရေပိုရေလွှဲ ဧရိယာအတွင်း သစ်တော ခုတ်ယူမှုဟာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြစ်ကြီးတွေ ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ရေပိုရေလွှဲ ဧရိယာတွေအတွင်း သစ်တောခုတ်ယူမှုတွေဟာ အဆိုးဝါးဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရေပိုရေလွှဲ ဧရိယာတွေထဲမှာ သစ်တောတွေရှိပါမှ ရေကိုထိန်းနိုင်ပြီး ရေစီးရေလာကို မျှတအောင် လုပ်ကာ အဓိကအားဖြင့် ရေထဲမှာ နုန်းပါဝင်မှုကို လျှော့ချပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရေအားလျှပ်စစ်ဦးစီးဌာနက အငြိမ်းစားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းကျော်က ပြောပါတယ်။ ဒါတွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ အတွက် ရေပိုရေလွှဲဒေသတွေမှာ သစ်တောတွေ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးကာ ရေရှည်စီမံကိန်းအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ကြရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ၎င်းက ဆက်လက် ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘာဝမဟုတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ ပယောဂတွေကြောင့် မြစ်ကြောင်းတွေမှာ နုန်းပို့ချတွေကို ပိုမိုတိုးလာစေတာကြောင့် ဒါတွေကိုလည်း ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်မှာ ဆည်တွေ တည်ဆောက်မှုကြောင့် မြစ်ကြောင်းတွေ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟာလည်း မဟုတ်ဘဲ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်မှာ မည်သည့်ဆည်မှ ဆောက်မထားဘဲ မြစ်ရဲ့ မြစ်လက်တက်တွေပေါ်မှာသာ ဆည်တွေ ဆောက်ကာ ရေပေးဝေခြင်းကို လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ဟာ သူရဲ့ သဘာဝ ကိုယ်တိုင်က ဘူမိသက်တမ်း အလွန်နုပြီး သဘာဝ အလျောက် တိုက်စားမှုနဲ့ နုန်းပို့ချမှုများကာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုက်စားမှု အများဆုံး နံပါတ်(၅)မှာ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ သဘာဝကို မြစ်အစအဆုံး လေ့လာမှု တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး ပြုပြင်မှုတွေကို လေ့လာရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြစ်တွေဆိုတာ တစ်ခုကိုထိရင် အခြားတစ်ခုကိုပါ ထိခိုက်တတ်တဲ့ အတွက် မြစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ပါက သေချာလေ့လာ ဆန်းစစ်သင့်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်သင့် မလုပ်သင့်ကို တစ်ထိုင်တည်း ဆုံးဖြတ်လို့မရဘဲ စီမံကိန်းအပေါ် ပြုလုပ်ထားတဲ့ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေအပေါ် မူတည်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဦးချိုချိုက ပြောပါတယ်။ မြစ်ကြီးတွေ ပျက်စီးလာတဲ့ အချက်တွေမှာ ရေပိုရေလွှဲ ဒေသတွေ ပျက်စီးခြင်း၊ သဲချောင်းတွေက သဲတွေ စီးဝင်ရောက်ရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုနဲ့မြစ်ကို သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ဒီလိုအဖြစ်တွေကြောင့် မြစ်တွေဟာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ပမာဏထက် ပိုကျယ်လာပြီး သောင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေ လိုအပ်တာထက် ပိုလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်